Hitondra an-tsehatra ny « Lavitra ahy » i Faniah
Mbola manohy hatrany ny fampahafantarana ny rakikira vaovao « Lavitra ahy » i Faniah. Etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray no hitondrany an-tsehatra io rakikira io anio alina manomboka amin’ny 8 ora sy sasany. Hokaloiny mandritra izany seho izany ireo hira rehetra voarakitra ao anatin’io rakikira io raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Ny foko no mibaiko », « iza no tinao »…
Mpitendry hiara-dia aminy amin’io seho io ry Miora Rabarisoa eo amin’ny amponga maroanaka, Joro Rakotorafiharison eo amin’ny gitara, Andry Michaël Randriantseva eo amin’ny Piano sy ny Saxophone. Vahiny nasaina ihany koa anefa i Jean Yves amin’ny « flûte traversière ». Ankoatra ireo hira voarakitra ao anatin’io rakikira io, dia manavanana an’i Fanyah amin’ny seho takariva toa izao ihany koa ny findramana sy fiangaliana hirana mpanakanto hafa. Anisan’ireo nahafantarana azy ny fiangaliana ny sangan’asan-dry Alicia Keys, Beyoncé… nefa amin’ny endrika hafa maha Fanyah azy.
Dôme – Ankorondrano
« Ndao hifety » iarahana amin’i Samoëla
Mateti-piavy eo amin’ny seho takariva. Taorian’ny teny amin’ny SK Melody, dia hanohy ny fiakarana an-tsehatra amin’ny « ‘Ndao hifety » indray i Samoëla, anio alina amin’ny 8 ora etsy amin’ny Dôme Ankorondrano. Seho tafiditra amin’ny fanapariahana hatrany ilay rakikira farany « Radion’ambanivolo ». Toa ny mahazatra dia entin’ity mpanakanto ity an-tsehatra ireo hira rehetra ao anatin’ny rakikira, ary indrindra ireo hira tsy azo hialana toa ny « sexy Girl », « Rava », « hafaliana »…
Hotel de l’avenue – Analakely
« Zik fun » hosantarin’i Solo Andrianasolo
Seho hafa mihitsy ny « Zik Fun » izay hosantarin’i Solo Andrianasolo etsy amin’ny Hotel de l’Avenue Analakely anio alina manomboka amin’ny 8 ora. Solo Andrianasolo izay fantatra eo amin’ny fahaizany mitendry gitara sy milomano ao anatin’ny gadona jazz. Hokaloin’ity mpanakanto ity mandritra ny hetsika ireo hira efa nahafantarana azy teo aloha toa ny « Hasambarana », « Ho zakaiko »… ary ireo hira vaovao. Hivelatra amin’ny fiangaliana hirana mpanakanto hafa ihany koa anefa izy. Ho vahiny mandritra ity seho heverin’ny mpikarakara atao isam-bolana ity ny tarika Layprint.
PK O – Soarano
Mozika Rock entin’ny tarika Green
Elaela tsy tazana tamin’ny fampisehoana. Hiaka-tsehatra etsy amin’ny PK O Soarano indray ny tarika Green, anio alina manomboka amin’ny 9 ora ary hitondra ireo mozika rock. Hifangaro ao anatin’ny fampisehoana ireo rock mavesatra sy ny hira milamindamina nahafantarana ny tarika. Anisan’ireo efa nampanantenain’ny tarika fa hokaloiny mandritra ny seho ny « atsimo sy avaratra », « Horohoro », « ady »… Toa izany koa ny « Fo roa », « Ianao »… ary ny hira vaovao toa ny « Hiaraka indray »
Amitié Fandian -67 ha
Vazon’ny tanàna an-tsehatra
Mpanakanto roa samy ao anatin’ny sokajin’ireo hira madinika sy miangaly ny hiran’ny fo no hiara-dia amin’ny « Vazon’ny tanàna an-tsehatra », eny amin’ny Amitié Fandian 67ha anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Ny tarika Toko Telo andaniny, ary ny tarika Miandry kosa ankilany. Na samy ao anatin’ny vazo an-gitara aza anefa dia samy manana ny hanitra ho azy ny tarika roa tonta.
Mozika mafana entin’i Dat’Kotry
Tsy tazana firy tamin’ity taona ity. Taorian’ny tetsy amin’ny Le Glacier ny volana jona, hivoaka indray amin’ny fahanginany i Dat’Kotry ary manome fotoana ireo mpankafy azy etsy amin’ny Jao’s Pub Ambohipo anio alina amin’ny 9 ora. Fotoana hitondran’ity mpanakanto ity ireo hira amin’ny gadona « batrelaka » nahafantarana azy. Niatomboka tamin’ny « Sheila » izany ary nitohy tamin’ny « Hikarama »…
Nahafantarana an’i Dat’Kotry tao anatin’izay 15 taona izay ny fitadiavana ny lalana eo amin’ny sehatry ny mozika eran-tany, na ny « world music » amin’ny fampivadiana ny mozika nentin-drazana amin’ireo zava-maneno maoderina, ary ahitana haingony kely amin’ny gadona vahiny.
« Indray andro hono » atolotr’i La bande à Momota
Seho ho an’ny ankizy, nefa hanasana ihany koa ireo olon-dehibe. « Indray andro hono » no seho seho atolotr’i Momota sy ny ekipany etsy Antsahamanitra ny alahady tolakandro izao ao anatin’ny fotoam-pialan-tsasatra. Mandritra ity seho ity no hiarahan’ny fitantarana angano an-tsehatra sy ny fiaimpiainana indray ireo sary miaina mandeha amin’ny fahitalavitra. Ho velomin’i Momota sy ny ekipany ireo olo-malazan’ny sary miaina, ary toa izany koa ireo hira samihafa mandravaka azy ireny.